Riek Machar oo loo dhaariyey madaxweyne ku xigeenka South Sudan - BBC News Somali
Riek Machar oo loo dhaariyey madaxweyne ku xigeenka South Sudan
Salva Kir iyo Riek Machar
Hoggaamiyihi hore ee fallaagada South Sudan ayaa maanta loo dhaariyey jagada madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dalka Suudaan.
Munaasabadda Machar lagu dhaariyey ayaa ka dhacday aqalka madaxtooyada dalka South Sudan ee ku yaalla magaalada Jubba.
Munaasabadda Macahar xilka looga dhaariyey waxaa goob joog u ahaa Madaxweyne Salvakir iyo Madaxa goalaha madaxa bannaan ee Sudan Abdel Fatah Al-Burhan.
Seddex madaxweyne ku xigeen oo kale oo uu yeelanayo dalka South Sudan ayaa sida oo kale lagu dhaariyey.
Madaxweyne ku xigeennada seddexda ee la dhaarinayana waxaa ka mid ah xaaski madaxweynihi hore John Garang ee Rebeca Garang.
Madaxweynenku xigeenka kalana wuxuu ka imanayaa isnbahaysiga xulafada mucaaradka ee isbahaysatay balse weli xulafada iskuma waafaqin cidda ay xilkasi u dhiiban lahaayeen.
Madaxweyne Salava Kir oo ayaa Mr Machar u magacaabay jagada madaxweyne ku xigeenka si loo meel mariyo heshiiska nabadeed ee la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka sokeeya ee dalka South Sudan ka taagnaa 6 sano, dagaalkaasi oo ay ku dhinteen boqollaal kun oo qof, malaayiinna ay ku barakaceen.
Waxaa sida oo kale la filayaa in lagu dhawaaqo gole wasiirro oo ka kooban dowladda iyo siyaasiyiinta mucaaradka.
Heshiiska dowlad awood qaybsi ku dhisan in lagu dhiso looga tala galay wuxuu noqday mid la yaab leh isla-markaana in mudda lagu jahawareersanaa.
Madaxweyne Salva Kir iyo Riek Machar oo la filayo iney heshiis kama dambeys ah gaaraan
Laba muddo oo horey loogu qabtay in dowlad loo dhan yahay lagu soo dhiso ayey ku guul darreysteen dhinacyada Suudaan isku hayo iney heshiiska nabadda ku meel mariyaan, kaddibna waxaa ka dhalatay qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalkaasi inuu Mareykanka cunaqabateyn saarto.
Haddaba, Madaxweyne Kir iyo Mr Machar waxay gaareen heshiis.
Qalalaasihii Suudaan oo heshiis laga gaadhay
Madaxweynahana wuxuu oggolaaday inuu yareeyo tirada gobollada oo uu marki hore damacsanaa 32 in hadda tirada gobollada laga dhigo 10 gobol oo keli ah.
Hoggaamiyihi hore ee fallaagada South Sudan Riek Machar
Mr Machar wuxuu isna oggolaaday inuu caasimadda dalkaasi ee Jubba uu ku soo laabto amnigiisana ay dowladda sugto.
Balse weli waxaa jira howlo qabya ah oo ay ka mid yihiin ciidamada mucaaradka in dowladda lala mideeyo iyo in shaqsiyaadki dambiyada dagaal geystay inta uu socday dagaalka sokeeye in caddaaladda la horkeeno.
Mucaaradka iyo dowladda Koonfurta Sudan oo heshiis kala saxiixday
Shacabka South Sudan waxay rajeeynayaan inuu heshiiskan meel maro dowlad loo dhan yahayna la dhiso, iyada oo dowladdi ugu horreysay ee loo dhamaa ay burburtay 2016-kii.
Muxuu yahay khilaafka heshiiska hortaagnaa?
Hogaamiyaha fallaagadii South Sudan, Riek Machar, wuxuu horay u sheegay in aanu la dhacsanayn qorshaha madaxweynuhu ku doonayo in dhabbaha loogu xaadho samaynta dawlad midnimo qaran ah oo dalku yeesho.
Sabtidii hore ayaa Madaxweyne Salva Skiir wuxuu aqabalay dalab hore ay mucaaradku u aqbaleen oo ahaa in gobollada dalka lagu soo celiyo tiradii hore oo ah waxaanu sidoo kale shaqada ka eryayey laba iyo soddonkii badhasaab ee gobollada ee hore loo magacaabay.
Warfidiyeenku waxay sheegayaan in labada dhinac ay weli aad u kala shakisan yihiin.
Madaxweyne Salvakiir wuxuu sheegay inuu aqbalay dalabka mucaaradka ee ahaa in tirade gobolada laga dhigo 10 halka uu marki hore doonayey 32 gobol.
Hadalka ka soo yeeray Salvakiir ayaa lagu tilmaamay iney tahay mid rajo gelineyso iney soo afjaranto cabashada mucaradka uuna hirgalo heshiiska nabadeed ee South Sudan.
Wuxuuna sida oo kale oggolaaday inuu jagooyin sare uu mucaaradka ka siiyo dowladda wadajirka ee awood qaybsiga ku saleysan oo lagu wado in dhawaan la dhiso.
Hase yeeshee, warmurtiyeed uu soo saaray hoggaamiyihii hore ee fallaagada, Rike Machar wuxuu ku gacan seydhay go'aanka madaxweynaha uu qaatay ee ah in ismaamullo gaar ah laga dhiso deegannada ay dagaalla beeleedyadu in muddo ah ka socdeen.
Kalsooni la'aanta labada hoggaamiye u dhaxeysa ayaana lagu tilmaamay mid ay weli fari ka qodneen.
Salva Kiir oo ugu baaqay Riek Machar in uu dalkiisa ku soo laabto
Sabtida maanta ayaana loo qabtay ugu dambeyn iney dowlad loo dhan yahay ay ku soo dhisaan.
Madaxweyne Salva-kiir iyo Madaxii hore fallaagada Riek Machar ayaa cadaadis caalami ah la kulmaya si ay u soo afjaraan meel marinta heshiiska nabadeed oo ay horay u wada gaareen.
Waxaana labada dhinac loogu baaqay kulankooda ugu dambeeya inta aan la gaarin wixa ay isku fahmi la'yihiin iney xalliyaan. Labada hogaamiye ayaa horay u saxiixay dhawr heshiis balse ma aysan noqn kuwa mira dhala.
Labada hogaamiye ayaa horay u saxiixay dhawr heshiis balse ma aysan noqn kuwa mira dhala.
Salva Kiir ayaa waddanka madaxweyne ka ahaa tan iyo markii dalkaasi South Sudan uu sanadii 2011-kii uu ka xoroobay Sudan.
Dagaalkan sokooye ayaa waxa uu dalkaasi ka bilowday sanadkii 2013-kii, kadib markii uu khilaaf dhaxmaray Mr Kiir iyo Machar oo xiligaasi ahaa ku xigeenkiisa.
Riek Machar : Lama dhacsani qorshaha Salva Kiir ee gobollada dalka lagu dhimayo
16 Febraayo 2020
Maxay Israa'iiliyinta u doortaan janaraalada iyo abaanduulayaasha?
32 Daqiiqadood ka hor
TOOS Israa'iil: "Ebrahim Raisi waa madaxweynaha ugu mayalka adag ee soo mara Iiraan"
Maxaad ka ogtahay Soomaalida siyaasabaha kala duwan loogu qafaashay Kenya?
Wax ka ogow dalalka ay ka dhaxeyso cadaawadda soo jireenka ah
Wax ka ogaw 10-ka tababare ee ugu taajirsan dunida